Trinity College, The University of Melbourne Information Seminar | Myanmar Youth Empowerment Opportunities
Posted on March 11, 2018 by MYEO in Events, seminar, Uncategorized //0Comments
Location: Sule-Shangrila, Yangon
IGCSE (သို့ ) အခြေခံအထက်တန်း အောင်မြင်ပြီး သြစတြေးလျနိုင်ငံ၏ နံပါတ် (၁) တက္က္ကသိုလ်ဖြစ်သော The University of Melbourne တွင် ပညာသင်ကြားလိုပါသလား?
၄င်းတက္က္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ရန်အတွက် အသေချာဆုံး ၀င်ခွင့်ရရှိနိုင်သည့် Foundation Program ကို Trinity College တွင် အရင်တက်ရောက်သင်ကြားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Trinity College ၏ ကျောင်းဖွင့်ချိန်များ၊ ၀င်ခွင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ကျောင်းလခများ၊ သင်ကြားရမည်ဘာသာရပ်များ၊ ကျောင်းလခ ၅၀% အထိပေးသည့် ပညာသင်ဆုများ အကြောင်းကို Trinity College ၏ Senior Marketing & Recruitment Manager ကိုယ်တိုင် မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ (အင်္ဂါနေ့ ) ညနေ ၅:၀၀ နာရီမှ ၇:၀၀ နာရီ ထိ Sule Shangri-La Hotel, Pinya Room တွင် ရှင်းလင်း ပြောကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများမှလည်း မိမိတို့ သိရှိလိုသည်များကို မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၄င်း ဟောပြောပွဲကို တက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့် Australian Visa & Student Services ဖုန်း 09450006944, 09450006955, 095147227, 09799450944, 09799450955 (သို့ ) [email protected] တို့ သို့ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည် ။
IGCSE (သို့) အခွခေံအထကျတနျး အောငျမွငျပွီး သွစတွေးလနြိုငျငံ၏ နံပါတျ (၁) တက်က်ကသိုလျဖွဈသော The University of Melbourne တှငျ ပညာသငျကွားလိုပါသလား?
၎င်းငျးတက်က်ကသိုလျသို့တကျရောကျရနျအတှကျ အသခြောဆုံး ဝငျခှငျ့ရရှိနိုငျသညျ့ Foundation Program ကို Trinity College တှငျ အရငျတကျရောကျသငျကွားရမညျဖွဈပါသညျ။
Trinity College ၏ ကြောငျးဖှငျ့ခြိနျမြား၊ ဝငျခှငျ့သတျမှတျခကျြမြား၊ ကြောငျးလခမြား၊ သငျကွားရမညျဘာသာရပျမြား၊ ကြောငျးလခ ၅၀% အထိပေးသညျ့ ပညာသငျဆုမြား အကွောငျးကို Trinity College ၏ Senior Marketing & Recruitment Manager ကိုယျတိုငျ မတျလ ၂၀ ရကျနေ့(အင်ျဂါနေ့) ညနေ ၅:၀၀ နာရီမှ ၇:၀၀ နာရီ ထိ Sule Shangri-La Hotel, Pinya Room တှငျ ရှငျးလငျး ပွောကွားပေးမညျ ဖွဈပါသညျ။
ကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူမြားမှလညျး မိမိတို့သိရှိလိုသညျမြားကို မေးမွနျးနိုငျပါသညျ။
၎င်းငျး ဟောပွောပှဲကို တကျရောကျလိုသူမြားအနဖွေငျ့ Australian Visa & Student Services ဖုနျး 09450006944, 09450006955, 095147227, 09799450944, 09799450955 (သို့) [email protected] တို့သို့စာရငျးပေးသှငျးနိုငျပါသညျ ။
Facebook Event Page Trinity College, The University of Melbourne Information Seminar